Global Voices teny Malagasy » Shina: Miantso an’i Guo Baofeng hiverina hody hisakafo hariva! · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Miantso an'i Guo Baofeng hiverina hody hisakafo hariva!
Voadika ny 11 Febroary 2019 3:56 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Shina, Hafanam-po, Mediam-bahoaka
Notazonin'ny polisy Mawei ao Fujian nandritra ny herinandro mahery ilay bilaogera Peter Guo Baofeng. Araka ny tatitry ny twitter (efa voasakana), Nangataka tamin'ireo enina notazonina, anisan'izany i Peter Guo, mba hanasonia fiaiken-keloka sy hiaiky fa nanao heloka bevava amin'ny fanalam-baraka sy fanaparitahana tsaho ho takalon'ny famotsorana azy ireo ny polisy ao Mawei.
Ankoatra izany, dia nifandray tamin'ny fianakavian'i Guo (ray sy anabavy) ny polisy Mawei omaly tolakandro (23 jolay) mba hankany amin'ny paositry ny polisy ary handresy lahatra azy mba hanasonia fiaiken-keloka. Na izany aza, tsy navelan'ny polisy hihaona mivantana an'i Peter ireo fianakaviana, fa kosa nasaina nanoratra taratasy fanoherana izy ireo. Namaly tamin'ny taratasy nosoratany ihany koa i Guo, nanizingizina fa tsy nanao zava-dratsy izy ary tsy nety nanao fiaiken-keloka. Nangataka ny anabaviny izy avy eo mba handefa akanjo sy vola ho azy.
Na dia teo aza ireo mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona nanome fanampiana, dia tsy nety nanakarama mpisolovava ny dadatoa sy ny rain'i Peter Guo, amin'ny lafiny iray noho ny tsy fananam-bola, ary amin'ny lafiny hafa satria tsy niombon-kevitra tamin'ny fomba nanakianan'i Peter ny polisy manampahefana tamin'ny tranga fanolanana faobe nihatra tamin'i Yan Xiaoling izy ireo. Soa ihany, fa nilaza ny ny vaovao farany avy amin'ny mpisolovava momba ny zon'olombelona, ​​Liu Xiaoyuan fa nankatoavin'ny filoha ambony indrindra ihany nony farany ny fitsidihan'ny mpisolovava ao amin'ny tobin'ny polisy Mawei amin'ny Alatsinainy ho avy .
Mandritra izany, manentana ireo mpiserasera mba hiloa-bava ireo naman'i Peter ao amin'ny twitter, toy ny famoahana sticker hoe: Guo Bofeng, miantso anao mba hody hisakafo hariva ny reninao!  ao amin'ny bilaogin'izy ireo:
Ny sasany kosa manome soso-kevitra mba handefa karatra paositra any amin'ny: Guo Baofeng, Efitra 205, Trano Fihazonana No.2, distrikan'i Cangshan, Fuzhou, Fujian, Shina 350018 (福州 仓山区 城门 樟 岚 村 下 董 自然村 福州市 第二 看守所 205 仓 郭宝锋 收,邮编: 350018), mba hiteny amin'ny polisy Mawei fa manaraka ny raharaha izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/11/134595/
 Notazonin'ny polisy Mawei ao Fujian nandritra ny herinandro mahery : https://advocacy.globalvoicesonline.org/2009/07/17/china-netizens-arrested-for-gang-raped-scandal-in-fujian
 ny vaovao farany avy amin'ny mpisolovava momba ny zon'olombelona, ​​Liu Xiaoyuan fa nankatoavin'ny filoha ambony indrindra ihany nony farany ny fitsidihan'ny mpisolovava ao amin'ny tobin'ny polisy Mawei amin'ny Alatsinainy ho avy: http://liu6465.blog.sohu.com/124516392.html
 famoahana sticker hoe: Guo Bofeng, miantso anao mba hody hisakafo hariva ny reninao!: http://web7.twitpic.com/any2y
 mba handefa karatra paositra : http://twitter.com/feng37/status/2772857892